တစ်စိမ်းမီးသတ်ဟယ်လိုဂျက်-O-Lantern Make လုပ်နည်း
တစ်ခုမှာ application ကို အစိမ်းရောင်မီး သင့်ရဲ့ဟယ်လို jack ကို-o-မီးအိမ်ထွန်းညှိဖို့ကအသုံးပြုနေသည်။ ဤသည်အံ့မခန်းရလဒ်များကို (ဗီဒီယိုကိုကြည့်) ကိုထုတ်လုပ်မယ့်စူပါလွယ်ကူပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်လုပ်ပုံကိုဖွင့်:
jack ကို-o-မီးအိမ်ထွင်းထု။ အစဉ်အလာဤရွှေဖရုံသီးပါလိမ့်မယ်, သင်မူကားစတာတွေဟာဖရဲသီး, သခွားမွှေးသီး, သုံးလို့ရတယ်
(များသောအားဖြင့်စတိုးဆိုင်၏ဆေးဆိုင်အပိုင်း၌တွေ့) boric acid ကို
Methanol (ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ကားအပိုင်း၌တွေ့ Heet ™လောင်စာကုသမှုကဲ့သို့)
သင့်ရဲ့ jack ကို-o-မီးအိမ်အတွင်းပိုင်းကိုက်ညီသောလူမီနီယံသတ္တုပါးသို့မဟုတ်အပူ-လုံခြုံကွန်တိန်နာ
သင်ဟာနည်းပညာပိုင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှကိုအနည်းငယ် Methanol add တစ်အပူ-လုံခြုံကွန်တိန်နာအတွင်းဖျန်း boric acid ကိုဖြစ်ပါသည်, ထို jack ကို-o-မီးအိမ်အတွင်းရှိကွန်တိန်နာသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်မီးထွန်းညှိ။ Methanol ၏အခိုးအငွေ့ဖိအားအလွန်မြင့်မားသည်နှင့်သင်အရောအနှောင့်လင်းလာသောအခါ '' whoof '' အသံကြားပါလိမ့်မယ်ကတည်းကဒါဟာတာရှည်-ကိုင်တွယ်ပေါ့ပါးသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်, ငါ့အမြင်ထဲမှာလူမီနီယံသတ္တုပါးနှင့်အတူ jack ကို-o-မီးအိမ်၏အတွင်းပိုင်းတန်းစီနှင့်အပူ-လုံခြုံကွန်တိန်နာအဖြစ်ရွှေဖရုံသီးကို အသုံးပြု. ထံမှလာသည်။ သငျသညျ, အပေါက်-o-မီးအိမ်အတွင်းပိုင်း boric acid ကိုဖြန်းန်းကျင်ကိုအနည်းငယ် Methanol မှာသုတျ, နှင့်အလှဆင််လင်းနိုင်ပါတယ်။ မီးလောင်ရာမီးပိုပြီးလောင်စာ add မနေပါနဲ့, ဒါကြောင့်ထွက်ဝင်သည်အထိစောင့်ပါ။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှတ်စု: အိမ်တွင်းဤသို့ပြုဘူး!
အားလပ်ရက် Clean-Up ကိုသိကောင်းစရာများ
အဆိုပါ Methanol သင့်ရဲ့ရွှေဖရုံသီးနှင့်အတူအချို့သော boric acid ကိုကျန်ကြွင်းကျန်ရစ်သည်မီးဖြင့်ပယ်ရှားကိုမီးရှို့သည်။ boric acid ကိုအထူးသဖြင့်အဆိပ်သင့်မဖြစ်ပေမယ့်, သင်ကလေးတွေဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်ဒီ jack ကို-o-မီးအိမ်စားရန်မလိုချင်ကြဘူး, မများလွန်းဘိုရွန်စက်ရုံများမှအဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကငါဆွေးဘို့အသုံးပြုအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အရပျ၌ rots မတိုင်မီကွာသင့်ရဲ့ jack ကို-o-မီးအိမ်ပစ်ရန်သေချာစေပါ။
ရုံဖရုံသီး boric acid ကိုပါရှိသည်သတိရ, ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုစားကြကုန်အံ့ပါဘူး။
Fructose crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားဖို့ကိုဘယ်လို
ပိုတက်ဆီယမ်နိုက်ထရိတ် Make လုပ်နည်း
သန့်စင်သောသဲသို့မဟုတ် silica Make ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးအမြင့် Ball ကိုကျောက်သားပြဿနာကဘာလဲ?
ထိပ်တန်း 10 သဘာဝဘေး, Movies
လင်ဒန်ဂျွန်ဆင်အကြောင်းသိထားမှ 10 အရာ
မာရျနတျနဲ့ Tom က Walker မှစ. quotes
(ကုန်ကျစရိတ်မှ) 'Coûter' 'Conjugate လုပ်နည်း
ဟယ်ရီ Houdini ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Prosauropod ဒိုင်နိုဆောရုပ်ပုံများနှင့် Profiles
တစ်ဦးစကိတ်စီးပေါ် Shuvit Pop လုပ်နည်း
Chord '' Santa Claus မြို့မှလာခြင်းဖြစ်သည် ''
သူ့ဖေဖေထံမှယာသုန် Morales တစ်ခုဖွင့်ပါပေးစာ
အဆိုပါ Pac 12 ညီလာခံသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
လ Walk - "Up ကို Shut နှင့်ကခုန်"
နိုင်ငံမှဒါရိမင်းကြီး Rucker ရဲ့ Switch Off ချေ
69 မှာ Patti Duke သေ